अनिश्चय, मृत्यु र भय झेलेको सन् २०२० विदा हुँदैछ, के सन् २०२१ मा खुशी फर्किएला ? - अनिश्चय, मृत्यु र भय झेलेको सन् २०२० विदा हुँदैछ, के सन् २०२१ मा खुशी फर्किएला ? -
उज्यालो प्रतिनिधि ११ पुष २०७७, शनिबार फुर्सद
सोमनाथ लामिछाने,काठमाडौं । अंग्रेजी संवतको सन् २०२० हामीबाट विदा हुने तरखरमा छ । मृत्यु, नैराश्य र गहिरो अनिश्चिय पार गर्दै सुदूर क्षितिजमा आशाका किरणको प्रतीक्षामा विश्व छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा जिम्मेवार नयाँ नेतृत्वको उदय भइरहेको छ भने आज हाम्रा अघिल्तिर देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरुको लामो सूची छ । मानव निर्मित प्राकृतिक विपदको चक्र यथावत रहेकै छ, तर त्यो भन्दा पनि हामी मानवका कतिपय घातक एवं खतरनाक अभ्यास वा व्यवहारमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।